Waa guuldarro in ajaaniibta aan looga faa'iidin ganacsiga dibadda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xarunta dhexe ee ganacsiga magaalada Stockholm. Sawirle: Hasse Holmberg/TT
Waa guuldarro in ajaaniibta aan looga faa'iidin ganacsiga dibadda
La daabacay torsdag 8 oktober 2015 kl 11.18
Shirkadaha laga leeyahay dalkan Sweden ayaa kor u qaadi lahaa baayacmushtarka iyo adeegyada ey dalka dibbadiisa u dhoofiyaan haddii ey ku dhiiran lahaayeen iney shaqaaleeyaan ajaaniibta dalka dibbadiisa ka soo jeedda ee dalka ku dhaqan lehna tacliinta sare.
Sida ey ku qoreen war-geeyska dhaqaalaha boggiisa doodda, labada dhaqaale yahan ee Andreas Hatzigeorgiou iyo Magnus Lodefalk. Middaasina oo ka dambeeysay war-bixin ey dhowaantan soo ban-dhigeen.
Andreas Hatzigeorgiou, ahna madaxa laanta dhaqaalaha ee xarunta baayac-mushtarka magaalada Stockholm ayaa sheegay in shirkadlayda dalku aaney aqoon u lahayn xiriirka ka dhexeeya baayacmushtarka dibadda iyo ajaaniibta dalka ku dhaqan ee leh tacliinta sare.
- Waxay ka dhigan tahay in baayacmushtarka ey shirkadaha dalkani la leeyihiin waddammada dibadda noqonayso mid xadidan, sida uu sheegay Hatzigeorgiou, kana mid ah labada dhaqaale yahan ee war-bixintan soo diyaariyey.
Amuurtan ayaa ka dambeeysa iyada oo maalin walba maalinta ka dambeeysa uu kor u sii kacayo baahida iyo xiriirka baayacmushtar iyo adeeg ee dalkani la leeyahay waddammada caalamka. Iyadoona war-bixinta labada dhaqaale yahan ku saleeysnayd sidii wax looga ogaan lahaa waxyaabaha hor-taagan.
Adeegyada ey shirkadaha dalkani ka fuliyaan waddammada caalamka ayaa ka duwan midka alaabooyinka dibadda loo dhoofiyo, maadaama aaney ku xirneyn tusaale ahaan cashuurro xuduudaha la isaga qaado iyo wixii la mid ah, hase yeshee u baahan aqoon dheeri ah oo loo leeyahay luuqadda iyo dhaqanka waddankaasi uu leeyahay, waa sida ey hadalka u dhigeen.
Labada caalin ayaa eegis ku sameeyey tira-koobkii shirkadaha dibadda u dhoofiya adeegyada iyo alaabooyinka sannadihii u dhexeeyey 1998 iyo 2007, halkaasina oo ay ka caddaatay in saameeyn ballaaran ay isku leeyihiin tirada ajaaniibta leh tacliin sare ee shirkad ka howl-gala iyo kor u kaca adeegyada ay shirkaddu dibadda u dhoofiso. Saameeynta ayaa aad u sii ballaaratay kolka ajaaniibta shirkadaha ka howl-galaa ey dalka ku sugnaayeen muddo afar sannadood ka yar.
-Isku celcelin waxaa caddaatay in kolka shirkadi shaqaaleeyso shakhsi ajnabi oo leh tacliin sare ayuu kor u kacay baayacmushatrkii dibadda ee shirkaddaasi illaa iyo 18%, sida uu sheegay Andreas Hatzigeorgiou. Isagoo hadalkiisii sii watana sheegay inuu dawladda dalka u direyo dhambaalka ah in arrimmahaa laga fekero kolka la leeyahay waxaannu ku dadaali doonaa sidii aannu kor ugu qaadi lahayn ganacsiga ey shirkadaha dalku la leeyihiin waddammada caalamka.
Isha/ Ekonomi Ekot